१० बुँदेले संकटमा एमाले भएका माओवादीहरु, मणि थापा भन्छन्ः केपी र रावलको भित्री दाउपेच हुने पो हो कि ? - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौं । नेकपा एमालेभित्र मध्यपन्थी धारसँग केपी ओलीले सहमति गरेपछि त्यसको सबैभन्दा ठूलो असर माओवादीबाट एमाले बनेकाहरुलाई परेको छ । यो संकट केन्द्रीय तहमा मात्रै नभएर जिल्ला तहमा पनि देखिएको हो । जेठ २ को संरचनामा फर्किनेबित्तिकै माओवादीबाट जिल्ला नेतृत्वमा रहेका केही जिल्लाका अध्यक्षहरुको पद समेत गुमेको छ । यो अवस्थामा नयाँ सिराबाट एकता नगर्ने हो या एकताको सन्देश दिने गरी सम्मेलन नहुने हो भने माओवादीबाट एमाले बनेकाहरु निरिह बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
केपी ओली र मध्यपन्थी समूहबीच एमालेको संरचनालाई जेठ २ मा नै फर्काउने सहमति भएको थियो । यो सहमति भएमा माओवादीबाट एमाले बनेकाहरु अब नयाँ सिराबाट एमाले प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ । जबकि माअ‍ोवादीबाट गएकाहरुले भने नेकपाकै निरन्तरता खोजेका छन् ।
विगतमा केपी ओलीलाई साथ दिएपछि स्थायी कमिटी भएका पूर्व माओवादीहरु आजको बैठकमा जाने या नजाने दोधारमा देखिन्छन् । यद्यपी नेता मणि थापाले भने स्थायी कमिटीको बैठकमा सहभागी हुने बताएका छन् । मध्यपन्थी पक्षले भने उनीहरु बैठकमा सहभागी हुन नहुने राय व्यक्त गरेको छ । मध्यपन्थी धारका नेता रघुपन्तले पूर्व माओवादी बाहेकको बैठक आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
यता माओवादीबाट एमाले बनेका स्थायी समिति सदस्य मणि थापाले भने कान्तिपुर दैनिकसँगको कुराकानीमा ओली र भीम रावलबीच भित्री दाउपेच हुनसक्ने आशंका पनि व्यक्त गरेका छन् ।
दश बुँदे सहमतिको मोडालिटीका नाममा रावल र ओलीबीच दाउपेचको सम्भावना रहेको उनले बताएका हुन । थापाले जेठ २ को संरचना आफूहरुलाई मान्य नहुने समेत स्पष्ट पारेका छन् । यद्यपी उनीहरुका अगाडि त्यो स्वीकार्नुको भने विकल्प देखिँदैन । कान्तिपुर दैनिकको अनलाईनमा प्रकाशित थापाको भनाई यस्तो छः
हामी तीन बजेको बैठकमा हामी जान्छौं । भीम रावलहरूले भन्दै आउनु भएको १० बुँदे कार्यान्वयन स्प्रिट के त्यो ठ्याक्कै थाहा छैन । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अक्षरसः लागू गर्ने कुरा गर्नुभएको छ । तीन जनाको सानो समिति बनेको छ । त्यो समितिले कुन स्प्रिटमा मस्यौदा तयार पर्छ । त्यो मस्यौदा ओली कमरेड र भीम रावल कमरेडलाई पनि चित्ता बुझ्नु पर्‍यो । सामान्यतः हामीलाई पनि चित्त बुझ्नु पर्‍यो । कार्यदलको कुरा तीन वटैलाई चित्त बुझ्ने गरी आउँछ कि आउँदैन हेरौं ।
केपी कमरेडले पनि मौखिक आउँदा सबै पालन गर्ने भनिहाल्नु हुन्छ तर लिखित आउँदा कुन स्तरमा स्वीकार गर्नु हुने हो र भीम रावल कमरेडले कुनस्तरमा खोज्नु भएका हो ? दुवैको दाउपेच भित्र हुने हो कि ? कुन स्प्रिटमा आउँछ थाहा छैन हेर्न बाँकी छ ।
हामीले भन्दै आएको जेठ ३ गते हो । जेठ २ को विषयमा आउँदा अध्यक्ष कमरेडले निरन्तर रुपमा हाम्रो विषयलाई राखिराख्नु भएको छ । त्यही भएर अध्यक्षको कुरालाई निरन्तर रुपमा मानेर आएको हो । यदि जेठ दुईमै फर्किने स्थिति बन्यो भने र उहाँहरूको बटमलाइन बन्यो भने हामीले प्रश्न उठाउँछौं ।
जेठ ३ को अध्यक्षको रुपमा स्वीकार गरेर हामी दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा बसेका हौं । हामी एमाले र माओवादी कसैको पनि निरन्तरतामा होइनौं । हामीले नेकपाको पहिलो अध्यक्षलाई समर्थन गरेको हो । एमाले र माओवादी अदालतले बनाइदिएको हो । उहाँहरू अदालतको पछि कुद्नु भयो । राजनीतिक दल अदालतको निर्णयमा कुद्नु भयो । एकतामै सबै अडिनु पर्दथ्यो ।
अदालतको फैसालपछि नयाँ तरिकाले पुनर्संगठित गर्न लाग्नुपर्ने थियो । राजनीतिक रुपमा सजिलो हुने भएकाले उहाँहरू पछि फर्किनु भयो । माओवादी र एमाले दुवैपछि फर्‍क्यो । नेकपा हुँदा पनि हामी एकताको पक्षधर हौं । घनश्याम भुसालहरू पनि एकताको पक्षधर हुनुहुन्थ्यो र यहाँ आइपुग्नु भयो । प्रचण्ड र ओली कमरेडलाई हामी मिलाउन लागेका हौं ।
अदालतको फैसलापछि पुरानोतर्फ फर्किने होइन, नेकपाको निरन्तरताको रुपमा पहिलो अध्यक्षलाई हामीले समर्थन गरेको हो । ओली कमरेडसँगको कुरा त्यही हो । उहाँले पुरानो नभै नयाँ एमाले हो भन्नु भएको छ । तर अदालतको फैसलाले बाध्यकारी भयो भन्ने मात्रै स्वीकार्ने भन्नु भएको छ । रुपमा पुरानो एमाले भयो तर सारमा नयाँ एमाले हो । यो एमाले अदालतले बनाएको तर्के छ । अध्यक्ष ओलीसहित उहाँलाई समर्थन गर्ने टोली यो विषयमा कन्भिन्स नै हुनुहुन्छ ।
राजनीतिक रुपमा त्यसलाई समर्थन गरेर आएका छौं । जेठ २ भनेर देशव्यापी रुपमा संरचना बनाउन खोज्नु भयो र जडसुत्रीय रुपमा लैजान खोज्नु भयो भने त्यसमा हाम्रो थोरै प्रश्न भने रहने छ । यो हामी चारै जनाको धारणा हो । यसमा एक प्रतिशत पनि शंका छैन । जेठ २ को मात्रै विषयले केपी शर्मा ओलीले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई पुनर्गठन गर्न खोज्नु भएको छ भने त्यो पुरा हुँदैन र अर्कोतर्फ प्रचण्डको पनि पुरा हुँदैन ।